Messenger အသုံးပြုသူတွေအတွက်အသုံးတည့်လောက်သော Tips များ! – AsiaApps
December 19, 2017 December 19, 2017 WilliamFeaturesNo Comment on Messenger အသုံးပြုသူတွေအတွက်အသုံးတည့်လောက်သော Tips များ!
Messenger ဆိုတဲ့ Application ကတော့ Facebook နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စာပို့ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Messenger ကစာပို့တဲ့ function တင်မကပဲအခြားသော function အချို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ စာပို့တာအပြင် Messenger အသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ function ၈ မျိုးကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Messenger မှာစာတွေ၊ emoji တွေ၊ Sticker တွေ အစရှိတာတွေပို့ရတာရိုးသွားပြီဆိုရင် နောက်ထပ် option တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ GIF(Graphic Interchange Format) ဖြစ်ပါတယ်။ GIFs အမျိုးမျိုးရှိပြီး မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ Character နာမည်ကို GIF search box ထဲရိုက်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ Character လှုပ်ရှားမှုဟန်တွေကို GIF အနေနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဉပမာ GIFs search box မှာ Deadpool လို့ရှာလိုက်ရင် Deadpool ရဲ့ပြောင်နေဟန်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Mentionafriend inagroup
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံစုံလင်လင် စကားပြောကြဖို့ Messenger မှာ Group Chat တစ်ခုစီလုပ်ထားကြပါတယ်။ လူနည်းရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမယ့် Group ထဲမှာလူများရင်တော့ Message တွေကလည်းပွထနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဘယ်သူကဘယ်သူ့ ကိုပြောမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ အဲ့လိုအခြေအနေရောက်ရင် “@” ကိုနှိပ်ပြီး ပြောချင်တဲ့လူကို mention ပြီးပြောခြင်းဖြင့် ခေါင်းရှုပ်တဲ့ ရန်ကကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ Mute လုပ်ချင်တဲ့ လူရဲ့ Conversation ကိုလက်နဲ့ဖိထားရင် Delete, Mute နဲ့ More ကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီထဲက Mute ကိုရွေးချယ်ခြင်းလိုက်ပါ။ 15 Minutes, 1 Hr, 8 Hrs, 24Hrs, Until I turn it back on ထဲကကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ပြီး Mute လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Adjust The Size Of Emoji
Emoji တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့် သေးသေးလေးတွေသာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍မိတ်ဆွေက Emoji တွေကို ခပ်ကြီးကြီးမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေအကြီးကြီးမြင်ချင်တဲ့ Emoji ကိုလက်နဲ့ဖိထားခြင်းဖြင့်ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Use Messenger on The Desktop
Messenger ကို Phone, Tablet စတဲ့ Device တွေမှာသာမက Desktop မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Application မလိုပဲ Messenger.com ကနေတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Basketball ဂိမ်းကို Messenger မှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download လုပ်စရာမလိုပဲကစားနိုင်မှာပါ။ အရင်ဆုံး Basketball Emoji ကိုရှာပြီးပို့လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ Emoji ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ မိတ်ဆွေပို့လိုက်တဲ့ လူ (သို့) Group နဲ့Basketball ကစားပြီး Score တွေပြိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Post တွေကို react ပေးနိုင်ရုံသာမက Messenger မှာရှိနေတဲ့ Message တွေကိုပါ react ပေးနိုင်ပါတယ်။ React ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ Post မှာ react ပေးရတဲ့ပုံစံအတိုင်းလက်နဲ့ ဖိပြီး ပေးချင်တဲ့ reaction တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Sendaballoon animation
Messenger မှာ ရှိတဲ့ ပူဖောင်း Emoji ကိုပို့လိုက်ရင် လှပတဲ့ animation ပူဖောင်းတွေအများကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပူဖောင်းတွေက အရောင်စုံနေပြီး မိတ်ဆွေပို့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း ပူဖောင်းတွေကအမြဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပူးဖောင်တင်မကပဲ အသည်းပုံနဲ့ အခြား Emoji အချို့မှာလည်းအဲ့လို Animation တွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အခုအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Messenger Function ၈ မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက် article တွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြပါဉီးလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
၂၀၁၈ MWC (Mobile World Congress) မှာထုတ်ဖော်ပြသမယ့် Samsung Galaxy S9